Google Wallet emelitere iji nwee ike ị nweta ego na ụlọ akụ | Akụkọ akụrụngwa
Google Wallet emelitere iji nwee ike itinye ego na ụlọ akụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị chere na Google Wallet bụ ọrụ Aga m anwụ mgbe mbido gam akporo Pay, ọ dị ka Google achọghị ịkwụsị ngwa. Yabụ, na nso nso a Google emelitere Google Wallet iji nwee ike ịnata na izipu ego site na ụlọ akụ.
Ọhụrụ a melite nke ochie Google ọrụ, onye ọrụ nke Google Wallet nwere ike izipu ego inwere na obere akpa gị na akaụntụ ụlọ akụ ọ bụla enwere ike ịnweta ego site na ụdị akaụntụ a, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịnweta nnwere onwe karịa na ịkwụ ụgwọ ekwentị ha mgbe ha na-eji Google Wallet.
Google Wallet ga-anọnyere anyị obere oge ka emesịrị mmelite ọhụrụ a
Gam akporo Pay Pay bu oru ugwo ohuru nke Google weputara iji zoo Apple Pay na Samsung Pay, ma obu eziokwu na na ubi a Google nwere ugbua ngwa nke mmadu ole na ole jiri. Ọtụtụ na-eche na mmelite a nwere ike ịbụ njedebe ikpeazụ ka ndị ọrụ ole na ole jiri Google Wallet nwere ike mechie akaụntụ gị site na iziga ego ozugbo na akaụntụ akụ ma si otú ahụ kwụsị ọrụ ahụ. Otú ọ dị, ọrụ ọhụrụ a nwere ike ime ka ọrụ ahụ dịghachi ọhụrụ ma na ị nweta ikike na ị na-enweta ọrụ dịka Paypal ebe ọ bụ na ị na-ekwurịta okwu na akaụntụ akụ ma ghara ịkwụ ụgwọ maka ya bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ na ole na ole na-achọta.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eji gam akporo Pay, mgbe ozi a ga-aba uru ịga n'ihu na ọrụ ahụ n'ihi mee elu mee ala ọrụ a ga-abịa ọrụ ahụ, na-enweghị mkpa itinye ma ọ bụ dabere na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị. Anyị amabeghị ezigbo mbipụta nke ọhụụ nke Google Wallet ma ọ bụrụ na enweghị ego ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, ekwentị mkpanaaka nwere ike ịkwụsị dochie kaadị akwụmụgwọ Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Google Wallet emelitere iji nwee ike itinye ego na ụlọ akụ
Hexadrone skyview wifi, nyocha zuru ezu
Samsung Galaxy Note 7 rutere China na-enweghị akara ọ bụla nke nsụgharị 6GB / 128GB